Politika momba ny tsiambaratelo - BALLYA
Ny tranonkalantsika dia: www.ballyabio.com
BALLYA dia manolo-tena hiaro ny fiainanao manokana ary hanome anao traikefa tsara rehefa mampiasa ny tranokalanay, ny vokatra na ny serivisinay.
BALLYA miaro ny zonao, amin'ny fotoana rehetra, hanovana an'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity. Raha manao fanitsiana izay manova ny fomba fanangonana, fampiasana, na fizarana mombamomba anay manokana izahay, dia halefanay ireo fanovana ireo ao amin'ity Politikan'ny tsiambaratelo ity. Raha manisy fiovana ara-materialy amin'ny Politikanay momba ny tsiambaratelo izahay dia hampandre anao koa izahay amin'ny alàlan'ny mailaka ary koa amin'ny alàlan'ny fandefasana fampandrenesana amin'ny tranokalanay na fandefasana fampandrenesana aminao amin'ny alàlan'ny mailaka. Tokony hojerenao tsindraindray ity Politika momba ny tsiambaratelo ity mba hahafahanao hanaraka hatrany ny daty momba ny politika sy fomba fanao ankehitriny indrindra. Hanamarika ny daty mahomby an'ny kinova farany momba ny Privacy Privacy izahay amin'ny faran'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity.
Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia manome anao torolàlana momba ny zonao sy ny adidinao mifandraika amin'ny mombamomba anao manokana.
BALLYA's Ny politika momba ny tsiambaratelo (ny "Politika momba ny tsiambaratelo") dia mametraka sy mampita ireo fitsipika fototra izay BALLYA manaraka izany amin'ny fiarovana ny mombamomba anao izay angoninay sy arahinay. Azafady mba mariho fa ny zon'ny tsiambaratelo sasany sy ny adidy dia mety tsy hitovy amin'ny toerana sasany mifototra amin'ny lalàna eo an-toerana, raha izany BALLYA hanaraka ny fepetra takian'ny lalàna eo an-toerana. Hatramin'ny fampandrenesana omena amin'ny fotoana fanangonana avy amin'ny tranokala na vokatra mifanohitra mifandraika amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia hifehy ny fampandrenesana manokana na fanambarana momba ny fiainana manokana fanampiny.
Toy ny ankamaroan'ny mpandraharaha tranonkala, BALLYA manangona fampahalalana tsy miankina amin'ny tena manokana momba ny karazan-java-misy atokana ho an'ny mpizaha tranonkala sy ny mpizara, toy ny karazana browser, ny safidin'ny fiteny, ny tranokala miresaka, ary ny daty sy ny ora nangatahan'ny mpitsidika tsirairay. BALLYA's tanjona amin'ny fanangonana vaovao tsy miankina manokana dia ny mahatakatra tsara kokoa ny fomba BALLYA's mampiasa ny tranonkalany ny mpitsidika. Indraindray, BALLYA dia afaka mamoaka vaovao tsy miankina amin'ny daholobe, ohatra, amin'ny famoahana tatitra momba ny fironana amin'ny fampiasana ny tranokalany.
BALLYA manangona ihany koa fampahalalana mety ho fantatry ny tena manokana toa ny adiresy Internet Protocol (IP) ho an'ireo mpampiasa miditra ary ho an'ireo mpampiasa mamela hevitra ao amin'ny bilaogy / tranonkala ballyabio.com. BALLYA ny adiresy IP mpampiasa sy mpaneho hevitra fotsiny no ampahafantariny ao anatin'ny toe-javatra mitovy izay ampiasana azy sy ampahafantariny ny mombamomba azy manokana araka ny voalaza etsy ambany, afa-tsy ny adiresy IP mpiresaka sy adiresy mailaka no hita ary ampahafantarina amin'ireo mpitantana ny bilaogy / tranokala nisy ilay hevitra ankavia.
3. Fanangonana fampahalalana manokana
Ny "mombamomba anao manokana" dia fampahalalana azo ampiasaina hamantarana olona iray, ary mety misy zavatra toy ny anaranao, adiresy ara-batana, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, fampahalalana momba ny fidirana an-tsokosoko, safidin'ny varotra, fifandraisan'ny orinasa, na toerana misy anao. BALLYA dia mety manangona mombamomba anao manokana izay ilaina amin'ny tanjona ara-dalàna ara-dalàna, izay hambara aminao amin'ny fotoana fanangonana. BALLYA hampiasa ity fampahalalana ity fotsiny ho an'ny tanjona nanangonana azy. BALLYA Azonao atao ihany koa ny manangona fampahalalana manokana avy amin'ny loharanom-baovao avy atokisana ary mampiditra antoko fahatelo mba hanangona ny mombamomba anao manokana hanampy anay. Hamarininay fa mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo EU-US ny antoko fahatelo ampiasainay.
Ny iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra amin'ny fanangonana ny mombamomba anao manokana dia mandritra ny fandefasana endrika an-tserasera na amin'ny fisoratana anarana, ao anatin'izany ny toerana misy ny mpampiasa tranonkala mangataka fampahalalana vitsivitsy, ny taratasy fahalalam-pomba, ny fisoratana anarana amin'ny hetsika iray, na ny famaliana ireo tolotra mitovy amin'izany ohatra ny ohatra santionany, fotsy taratasy, na fampahalalana fanampiny momba ny vokatra.
Amin'ny tranga sasany, BALLYA ary ny antoko fahatelo ifandraisantsika dia mety manangona sy manangona tahiry avy hatrany amin'ny alàlan'ny cookies, weblogs, web beacon, ary fampiharana hafa mitovitovy amin'izany. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina mba hahatakarana tsara kokoa sy hanatsarana ny fiasa, ny fahombiazana ary ny fahombiazan'ny serivisy fanaterana votoaty sy hanampiana anay hampifanaraka ny atiny na tolotra ho anao. Azafady mba vakio ny fizarana "Cookies" etsy ambany raha mila fanazavana fanampiny.
4. Tanjona sy fampiasana ny mombamomba anao
BALLYA azonao atao ny mampiasa ny mombamomba anao manokana ho an'ny asa aman-draharaha, ara-dalàna, ara-pitantanana ary antony ara-dalàna hafa avelan'ny lalàna manan-kery. Ny sasany amin'ireo fomba mety hampiasantsika ny mombamomba anao dia:
Manome anao vokatra na serivisy nangatahina aminao.
Manome anao fampahalalana momba ny vokatra na hetsika mitovy amin'izany.
Famakafakana sy fanaraha-maso ny habetsaky ny fampiasana.
Fanomezana mombamomba ny vokatra sy serivisy namboarina.
Mamela ny mpampiasa handray anjara an-tsitrapo amin'ny mailaka na hetsika hafa.
Manome fanavaozana ny serivisy vokatra, fampahalalana ary fampandrenesana.
Mandefa fifandraisana, ao anatin'izany ny marketing na tanjona hafa mahafa-po ny mpanjifa.
Famolavolana baiko ary hanomezana antontan-taratasy momba ny fifanakalozana.
Mifandraisa amin'ny mpampiasa raha mila fanamarinana vaovao.
5. Zo afaka miditra, manitsy ary mamafa ny mombamomba anao
Miezaka izahay mba hahazoana antoka fa ny fampahalalana momba anao dia azo antoka, marina ary vaovao. Raha ny mombamomba anao dia notazonin'ny BALLYA, azonao atao ny mahazo ny mombamomba anao amin'ny haben'ny takian'ny lalàna hijerena, hanavaozana, hanitsiana ireo tsy fahamarinana ary, raha misy izany, hamafa ny mombamomba anao manokana, mifanaraka amin'ny lalàna mifehy. Rehefa nangatahana tamin'ny fifandraisana voatanisa etsy ambany izahay dia hanome anao fidirana mety amin'ny fampahalalana manokana angoninay momba anao. Satria ny mombamomba anao manokana — ohatra ny adiresy mailakao — takiana mba hifandraisana aminao, dia mitazona ny mombamomba anao izahay raha mbola miasa ny kaontinao. Hahafahanao manitsy, mamindra, manavao, manova na mamafa izany vaovao izany. Azonao atao ihany koa ny mametra ny fampiasana sy ny fampahalalana ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny tsy fisoratana anarana amin'ny fifandraisana marketing na ny fifandraisanao aminay amin'ny adiresy etsy ambany etsy ambanin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe "Fampahalalana mifandraika" na amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka info@ballyabio.com. Azafady mba mariho fa misy fampahalalana vitsivitsy mety mijanona ao amin'ny firaketana anay na dia efa nangataka famafana ny mombamomba anao aza ianao, araka ny alàlan'ny lalàna ankapobeny momba ny fiarovana ny angovo eoropeanina 2016/679. Ho fanampin'izany, mety misy fetran'ny habetsaky ny fampahalalana azontsika omena. Ohatra, azontsika atao ny mametra ny fidirana amin'ny mombamomba antsika manokana, raha ny enta-mavesatra na ny fandaniana amin'ny fanomezana fidirana dia tsy mifanaraka amin'ny risika amin'ny tsiambaratelon'ny olona iray na amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny hafa.
6. Fizarana mombamomba anao manokana
BALLYA dia mety hampahafantatra ny mombamomba azy amin'ireo zanany sy mpiara-miasa aminy.
Mety misy tranga rehefa BALLYA dia mety hampahafantatra ny mombamomba anao nefa tsy manome anao safidy hahafahanao manaja ny fangatahana nataonao tamin'ny alàlan'ny vokatra na serivisy; mifanaraka amin'ny lalàna na valin'ny didim-pitsarana, fangatahan'ny governemanta, na fizotry ny lalàna hafa; miaro ny tombontsoa, ​​ny zony, ny fiarovana, na ny fananan'ny BALLYA na ny hafa; miaro amin'ny hosoka na amin'ny fitantanana risika; na mamaly ny antoko fahatelo ratsy (izany hoe ny antoko mpanohitra sy ny mpisolovava azy ireo ary ireo masoivohony hafa) ao anatin'ny raharaham-pitsarana. Ho fanampin'izay, raha BALLYA mivarotra ny rehetra na ny ampahany amin'ny orinasany na manao fivarotana na famindrana ny fananana na tafiditra amin'ny fampiraisana na famindrana orinasa, manaiky ianao fa BALLYA afaka mamindra ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo ao anatin'io fifanakalozana io.
Amin'ny tranga rehetra BALLYA mitaky ny antoko fahatelo tsy misy ifandraisany hitandrina ny mombamomba azy manokana ho tsiambaratelo. BALLYA dia tsy hanome ny mombamomba anao manokana ho an'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjon'izy ireo manokana raha tsy misy ny fanekenao.
Raha mandray anjara amin'ny dinika fifanakalozan-kevitra ianao, efi-tserasera na manome hevitra mifandraika amin'izany BALLYA amin'ny haino aman-jery sosialy na sehatra ampahibemaso hafa, tokony ho fantatrao fa ny fampahalalana omenao any (izany hoe ny mombamomba anao) dia ho azon'ny besinimaro ampiasaina, ary azo ampiasaina hifandray aminao, handefasanao hafatra tsy ampoizina, na ho an'ny tanjona tsy BALLYA na tsy voafehinao. Azafady, fantaro azafady fa ny forum media sosialy sy ny chat room tsy fehezin'ny BALLYA mety misy lalàna sy fepetra fanampiny. BALLYA dia tsy tompon'andraikitra amin'ny mombamomba anao na fampahalalana hafa nofidinao handefa amin'ireto forum ireto izay tsy BALLYA-voafehy.
BALLYA Mety hanome anao ny fahaizana mizara ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny tranokala tambajotra sosialy (oh: Facebook, Twitter), amin'ny fampiasana fitaovana fampidirina ao amin'ny tranokala (oh: bokotra Facebook "Like", na bokotra Twitter "Tweet"). Ny fampiasana fitaovana mitambatra toy izany dia ahafahanao mizara ny mombamomba anao momba ny tenanao amin'ny olon-kafa na amin'ny besinimaro, arakaraka ny toerana napetrakao tamina tranokala tambajotra sosialy toy izany. Raha mila fampahalalana misimisy kokoa momba ny tanjona sy ny haben'ny fanangonana angona sy ny fampiasana mifandraika amin'ny tranokala tambajotra toy izany na fitaovana ampidirina ao amin'ny tranokala, tsidiho azafady ny politikan'ny fiainana manokana ataon'ireo orinasa manome ireo tranonkala fifaneraserana ireo. BALLYA dia tsy tompon'andraikitra amin'ny mombamomba anao na amin'ny fampahalalana hafa nofidianao hizara amin'ny alàlan'ny tranonkala fifaneraserana.
7. Fiarovana ny mombamomba anao
BALLYA manana fiarovana ara-batana sy ara-pitantanana ary ara-teknika mba hiarovana ny mombamomba anao. BALLYA handray fepetra araka ny antonony sy mety mba hiantohana ny fiarovana ny mombamomba anao amin'ny fanarahana ny lalàna mifehy.
8. Fitanana ny mombamomba anao
BALLYA dia hitazona ny mombamomba anao araka izay ilaina mba hanatanterahana ireo tanjona nanangonana azy. Hotazominay sy hampiasa ny mombamomba anao araka izay ilaina izahay hanarahana ny fepetra takian'ny orinasa, ny adidy ara-dalàna, ny famahana ny fifanolanana, ny fiarovana ny fanananay ary ny fampiharana ny fifanarahanay.
Rehefa mitsidika ny BALLYA tranokala, mety manontany ny solo-sainanao ireo mpizara anay raha toa ka misy cookies voatondro teo aloha BALLYA. Ny cookie dia rakitra an-tsoratra izay noforonina rehefa mitsidika tranokala manokana toy ny a BALLYA Aorian'izay, isaky ny mitsidika ny BALLYA tranokala, maka anao ilay mpanamory anao ary mandefa an'ity rakitra ity ao amin'ny BALLYA mpizara tranonkala. Manatsara ny traikefan'ny mpampiasa tranonkala ny cookies amin'ny:
manampy BALLYA manamarina anao ho mpampiasa rehefa miditra amin'ny faritra azo antoka amin'ny tranokala ianao;
Mitahiry fampahalalana momba ny hetsiky ny mpampiasa tranokalanao mba hahafahanao maka mora foana ny toerana nijanonanao teo amin'ilay BALLYA's pejin'ny mpizara;
Mitahiry ny safidin'ny mpampiasa anao, izay ahafahanao manamboatra ny fomba fampisehoana ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny fisehon'ny tranonkala na lohahevitra; SY
Manokana ny fomba anaovana BALLYA mamaly anao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny marketing.
Ny cookies BALLYA Ny fanangonana dia mety ahitana ireto fampahalalana manaraka ireto: identifier tsy manam-paharoa, safidin'ny mpampiasa ary fampahalalana momba ny mombamomba ampiasaina hamboarina manokana ny atiny aseho amin'ny mpampiasa tsirairay. Hampahafantarina anao ny fampiasanay cookies rehefa mitsidika ny BALLYA tranokala. Safidinao izany raha avelanao BALLYA hitahiry izany fampahalalana izany amin'ny solo-sainanao na ny fitaovanao. Mety ho azonao atao ny mametraka ny tranokalan'ny tranonkalanao hanairana anao rehefa misy cookie ampiasaina, ary azonao atao ny mampiasa ny browser-nao hanaiky na handavana ny cookie; ho fanampin'izay, azonao atao ihany koa ny manafoana ilay endri-cookie ao amin'ny tranonkalanao manontolo. Na izany aza, ny fampandehanana cookies dia mety hanakana anao tsy hampiasa endri-javatra sasany BALLYA tranokala. Afaka mahita fampahalalana misimisy kokoa momba ny cookies sy ny fomba fiasan'izy ireo ao amin'ny aboutcookies.org
Azontsika atao ny manangona sy mizara ny toerana ara-nofo an'ny fitaovanao miaraka amin'ny fanekenao ho an'ny tanjona mifanaraka amin'ity Politikan'ny tsiambaratelo ity, toy ny hanomezana anao vokatra na serivisy miorina amin'ny toerana natokana ho anao. Amin'ny tranga sasany, azonao atao ny mamela na mandà ny fampiasana ny toeran'ny fitaovanao, fa raha misafidy ny handà izany ianao dia mety tsy ho afaka hanome anao ny vokatra na serivisy natokana ho anao.
Misy mpizaha tranonkala sy fitaovana sasany mamela anao handefa safidinao mba tsy ho “arahana” amin'ny Internet. Amin'izao fotoana izao, BALLYA tsy manova ny zavatra niainanao raha mifototra amin'ny fampielezana na fambara toy izany.
10. Famindrana ny mombamomba anao manokana
As BALLYA dia fikambanana manerantany, azonay atao ny mamindra ny mombamomba anao amin'ny a BALLYA sampana na mpiara-miasa, na ho an'ny antoko fahatelo araka ny voalaza etsy ambony izay hita any amin'ny firenena samihafa manerantany. Amin'ny fampiasana ny tranokalanay na ny vokatra anay, na ny fanomezana fampahalalana manokana anay, izay avelan'ny lalàna manan-kery, dia manaiky ny famindrana, fanodinana ary fitahirizana na fampahalalana toy izany ianao ivelan'ny firenena onenananao izay mety tsy hitovizan'ny fenitra fiarovana ny angona.
BALLYA miaro ary mamela ny famindrana ny mombamomba anao amin'ny fomba maro:
Raha manana fitarainana momba ny fanarahanay ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ianao, dia tokony hifandray aminay voalohany amin'ilay adiresy voalaza etsy ambany eo ambanin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe "Fampahalalana mifandraika" na amin'ny alàlan'ny mailaka info@ballyabio.com. Hanadihady sy hanandrana hamaha ny fitarainana sy ny fifanolanana izahay momba ny fanangonana, fampiasana ary fampahafantarana mombamomba ny tena manokana mifanaraka amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity.
Raha manana tsiambaratelo tsy voavaha ianao na mampiasa angona izay tsy niresahanay tamin'ny fomba feno, dia mifandraisa amin'ny tompon'andraikitra mpanara-maso eo an-toerana. Amin'ny fepetra sasany, voafariparitra bebe kokoa amin'ny tranokala Privacy Shield, azonao atao ny mangataka arbitration raha toa ka lany ny fomba famahana olana hafa. Raha mpiasa ianao, mpiasa taloha, na mpiasa ho avy, azafady mba jereo ny fizarana 10 raha mila fampahalalana momba izay hifandraisanao raha manana olana manokana momba ny fiainana manokana na data ianao.
11. Fampahalalana ho an'ny mpiasa ho avy sy ny mpiasa
Raha mandefa fangatahana asa na mpiasa ianao izao BALLYA, BALLYA Nahazo alalana hanangona ny vaovao amin'ny endriny rehetra azony amin'ny alàlan'ny fangatahanao asa na fanohizana asa miaraka aminao BALLYA, ary ny fandefasanao antontan-taratasy mifandraika amin'ny mpiasa, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny mombamomba anao izay apetrakao mifandraika amin'ny asanao na asa kasainao hatao ("Fampahalalana ho an'ny mpiasa"). Ohatra amin'ny fampahalalana momba ny mpiasa voangona mifandraika amin'ny asanao na ny fangatahanao asa dia misy nefa tsy voafetra amin'ny anaranao, daty nahaterahanao, fanondroana nomen'ny governemanta (pasipaoro, nomeraon-tsabo ara-tsosialy, nomeraon-dalàna momba ny mpamily), fampahalalana momba ny banky, ny toetoetran'ny fanambadiana, ny fampahalalana momba ny tombony , lohateny, tantaram-asa, fanabeazana, mari-pahaizana momba ny asa, ary angona momba ny mpiasa manokana mifandraika amin'izany. Izahay koa manangona ny sasany amin'ireto fampahalalana ireto momba ireo olona miankina aminao rehefa manome izany ho anao ianao rehefa misoratra anarana amin'ny fahasalamana sy tombontsoa hafa na manome fampahalalana momba ny fifandraisana. Ny fampahalalana momba ny mpiasa dia tsy misy fampahalalana azo ampiasain'ny besinimaro ary manilika ny fampahalalana hita amin'ny karatra fandraharahana.
BALLYA hanangona, hampiasa, hitahiry ary hihazona, ary hiantoka ny fiambenana ara-tsosialy na ny laharan-tarehinao hafa mifanaraka amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity. BALLYA tsy hiresaka an-tsitrapo na hametraka, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, ny fiantohana ara-tsosialy anao na ny nomeraonao hafa amin'ny besinimaro. BALLYA dia tsy hanao pirinty ny fiarovana ara-tsosialy anao na ny nomeraonao hafa amin'ny karatra takiana aminao hidiranao amin'ny serivisy ho an'ny mpiara-miasa omena anao BALLYA. BALLYA dia tsy hitaky ny handefasanao ny fiarovana ara-tsosialy na nomeraonao hafa amin'ny Internet, raha tsy hoe azo antoka ny fifandraisana na voafafa ilay fiarovana ara-tsosialy na mari-pamantarana hafa. BALLYA dia tsy hanao pirinty ny fiarovana ara-tsosialy anao na ny nomeraonao hafa amin'ny fitaovana alefa aminao, raha tsy ny lalàna na fanjakana federaly dia mitaky na mamela ny fiantohana ara-tsosialy na ny laharana famantarana hafa hapetraka ao amin'ilay antontan-taratasy halefa.
Araka ny lalàna manan-kery, BALLYA dia afaka mampiasa ny fampahalalana momba ny mpiasa hanombanana ny fangatahana asa, hitantanana ny lafiny fifandraisan'ny mpiasa amin'ny mpampiasa (izany hoe ny fiofanana, ny karama, ny tombony, ny dia, ny fandoavana ny vola, ny fanombatombanana ny asa, ny fandrindrana ny fifandimbiasana, ny fiarovana ny mpikambana ao amin'ny ekipa), ny fanadihadiana sy ny valiny. izay fangatahana mifandraika amin'ny asanao, ary mifanaraka amin'ny lalàna sy lalàna mifehy. Ny fampahalalana momba ny mpiasao dia tsy hampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra na amin'olon-kafa, raha tsy ekenao manokana ny fampiasana izany.
BALLYA mizara ny mombamomba anao momba ny mpiasa amin'ny antoko fahatelo izay manome ny asan'ny mpiasa an-toerana any ivelany. Ireto antoko fahatelo ireto dia takiana mba hiarovana ny mombamomba ny mpiasa. BALLYA dia mety hampiharihary ny mombamomba ny Mpampiasa anao raha toa ka takiana amin'ny alàlan'ny lalàna (toy ny ampahany amin'ny hetsiky ny governemanta na fanenjehana azy), ny fangatahan'ny governemanta na ny fanjakana manara-penitra, na ny fikambanana mifehy, na ny antoko fahatelo mifandraika amin'izany toy ireo teknisianina momba ny tranokala, brokers, auditors, mpisolovava, na mpanolotsaina matihanina. Amin'ny tranga izay BALLYA heverinao fa ilaina izany na amin'ny toerana takian'ny lalàna hamoahana ny mombamomba ny mpiasa amin'ny toe-javatra sasany izay iharan'ny risika, ny fiarovana, na ny fahasalaman'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, azonay atao ny mizara ny mombamomba anao momba ny mpiasa miaraka amin'ireo mpisolovava anay, mpampihatra lalàna na olon-kafa izay ara-dalàna. nahazo lalana Araka ny BALLYA manohy mampivoatra ny orinasantsika, dia afaka mividy na mivarotra fananana isika. Amin'ny tranga tsy ampoizina dia BALLYA na ny ankamaroan'ny fanananay rehetra dia azo ny fampahalalana ho an'ny mpiasa dia mety ho iray amin'ireo fananana nafindra.
Ny mombamomba ny mpiasa dia azo tehirizina anaty kopia na endrika elektronika ao amin'ny biraon'ny sampanao na amin'ny rahona any Etazonia na firenena hafa misy anao BALLYA, ny mpiara-miasa aminy, ny masoivohony, na ny mpifanaraka aminy manao orinasa. Ny fampahalalana momba ny mpiasao dia mety hafindra ao amin'ny rafitry ny loharanom-pahalalanay ary ampiasaina hitantanana ny asanao, mety ho lasa ampahany amin'ny rakitrao momba ny mpiasa, ary azo ampiasaina amin'ny tanjona hafa mifandraika amin'ny asa. Ny mombamomba ny mpiasao dia tazomina raha mbola takina araka ny lalàna izany.
Raha misy fitarainana momba ny fanarahanay an'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia azonao atao ny mandefa mailaka info@ballyabio.com.
12. Fitsipika momba ny fiarovana ankapobeny momba ny angona eropeana
The BALLYA Ny politika momba ny tsiambaratelo dia miompana amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny fikirakirana ny angon-drakitra manokana arakaraka ny fitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny angovo eoropeanina 2016/679.
13. Tranonkala hafa
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia tsy mihatra amin'ireo tranonkala na fampiharana natolotry ny orinasa hafa na olon-tsotra, ao anatin'izany ny vokatra sy serivisy an'ny antoko fahatelo, izay azo aseho ho afa-po amin'ny fikarohana ao amin'ny tranonkalantsika. BALLYA mamporisika anao hamaky ny politika momba ny tsiambaratelo misy an'ny tranonkala fahatelo na ny fampiharana alohan'ny hampitana ny mombamomba anao.
Na dia vitsy aza ny ankamaroan'ny fanovana, BALLYA dia mety manova ny politikany momba ny tsiambaratelo indraindray, ary amin'ny BALLYA's fahaiza-misaina irery. BALLYA manentana ny mpitsidika hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana amin'ny politikany momba ny fiainana manokana. Raha manana kaonty ballyabio.com ianao dia mety hahazo fampandrenesana mampahafantatra anao ireo fanovana ireo ihany koa. Ny fampiasanao ity tranokala ity hatrany aorian'ny fanovana an'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia hanaiky ny fanovana toy izany.
15. Fifandraisana hafa amin'ny fifanarahana
Raha miditra amin'ny fifanarahana fifanarahana misaraka ianao BALLYA izay mitaky, na misaintsaina, manangona, mampiasa, na mizara vaovao momba anao amin'ny fomba hafa noho izay voalaza ao amin'ity Politikan'olom-pinoana ity dia mihatra ny fe-potoana nifanarahana.
16. Antsipiriany ifandraisana
Raha manana fanontaniana na ahiahy mifandraika amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ianao, mifandraisa BALLYA ao amin'ny info@ballyabio.com.
If BALLYA mila, na takiana, hifandray aminao momba ny tranga rehetra izay misy fampahalalana momba anao dia azonay atao amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona na mailaka.